New Historical Record nke okpomọkụ na Spain | Netwọk Mgbasa Ozi
New Historical Record nke okpomọkụ na Spain
Claudi ego | | Ebili mmiri ọkụ
Ọ bụrụ na ihe ahụbeghị izu gara aga ọ bụ n'ihi okpomọkụ. Edere ọtụtụ ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme n'ọtụtụ obodo na ọbụna mba n'onwe ya. Ndị ọkà mmụta sayensị na òtù mba dị iche iche adọwo aka ná ntị banyere ịrị elu a na-emenye ụjọ na ọnọdụ okpomọkụ. Ihe ndekọ zuru oke nke mba ahụ bụ na Cordovan obodo Montoro. Ndebanye aha 47,3 .C, karịrị na 0,1ºC ndekọ gara aga nke Spain nke dị na Murcia, nke 47,2ºC.
N’agbanyeghi na onodu ogugu adighi akwusi ito, o bu otutu aro otutu okpomoku di ka nke izu gara aga Ọtụtụ obodo dekọtara akụkọ ihe mere eme nke ha. N'ime ha, ọdụ ụgbọ elu Córdoba debara aha ya kachasị elu nke 46,9ºC, ebe ndekọ ndekọ mpaghara ya gara aga bụ 46,6ºC.
Ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme n'ọtụtụ ebe
Ọzọkwa edere na ihe 6 tinyere akụkọ akụkọ ihe mere eme. N'ime ha ọdụ ụgbọ elu Badajoz na 45,4ºC. Na Cáceres, 43,2ºC, Ciudad Real 43,7ºC, Granada Air Base 43,5ºC, Jaén 44,4ºC na Teruel debara aha 40,2ºC.
N'ụzọ dị mma, ọ dị ka okpomọkụ ga-enye nsogbu, yana eserese nke ihe egwu dị egwu nke Aemet nyere, n'agbanyeghị mpaghara ụfọdụ ndị ka nọ na agba mmanụ na odo, abụrụla nke a na-ebelata.
Ihe ịgbakwunye bụ na Aemet na-eche na ndekọ okpomọkụ nke akụkọ ihe mere eme, dịka nke edere na Montoro, enweghị ike ịme ya kpamkpam n'ihi na ha bụ ọdụ nke abụọ. Dịkwa ka ikpe Murcia. Ka ọ were ndekọ mba ahụ ga-abụ na Córdoba na 46,9ºC ya. N’agbanyeghi n’ikpeazụ, arụmụka abụghịzi nke ahụ. Ma ihe na-echegbu onwe banyere usoro ihe ndị a edenyere aha ha na aha ole edebara aha ha, yana ogologo oge ebe okpomọkụ karịa 40ºC anaghị akwụsị ịdebanye aha.
WMO, na-agbali iji gosipụta etu ihu igwe na ọnọdụ ihu igwe ga-esi na-aga n'ihu, nkọwa nke kachasị obodo ga-enwe nnukwu ebili mmiri n'ihi mmetụta agwaetiti ahụ ọkụ. Iji gaa n'ihu omume, Anyị nwere ike ịhụ ihu 2100 na Madrid, ọnọdụ okpomọkụ yiri nke ahụ dị na Las Vegas, yana ọnọdụ okpomọkụ dị ka nke Iraq na Egypt maka obodo ndị ọzọ dị na Spain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » New Historical Record nke okpomọkụ na Spain
Mgbanwe ihu igwe welitere ogo nke Oké Osimiri Tasman site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ogo atọ
Couldda nwere ike ịgbanwe obi ya na mgbanwe ihu igwe